Noocyada Qubayska Qolka Musqusha ee Keli Kaliya
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Noocyada Qubayska Qolka Musqusha ee Keli Kaliya
2020 / 08 / 26 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9454 0
The Qolka Musqusha ee Gacanta Kaliya xakamee biyaha kulul iyo kan qabow adigoo furaya tubbada gadaal ama gadaal adoo adeegsanaya gacantiisa. Xusuusnow in qaar ka mid ah tuubooyinka wareegaya ay soo bandhigaan hal dalool, tanina waxay ka dhigeysaa rakibaadooda mid aad u fudud iyaga oo kaliya geliya godka isla markaana hagaajinaya sagxadda, tanina waxay kuu horseedi kartaa qaab aad u qurux badan. Shantaan tubadood ee musqulaha keliya ee ugu sarreeya waa kuwo isku xidhan oo qurxan, ka dibna waxaad ku arki kartaa sawirradan. Hoos waxaa ku yaal shanta ugu fiican ee musqusha qubayska musqusha ee lagu rakibi karo musqushaada maanta oo la hubiyo in ugu sarreysa sare xilligan gaarka ah ee 2020.
Qolka Qufulka Qolka Qubayska ee Keliyaalaha ah ee Chrome.
Qaabeynta Smart. Waxay leedahay barkad si fiican u go'an oo ku lifaaqan dhamaadka chrome milicsiga.
Naqshadeynta raaxada. Naqshadeedu maahan mid soo jiidasho leh oo keliya laakiin sidoo kale waa mid aad u gaar ah, gaar ahaan iyada oo loo yaqaan 'triple--veveinging' sameynta musqul gaar ah oo ku soo jiidasho leh soo jiidashada musqushaaga si ay ugu muuqato baahi badan.
Qubbada musqusha ee aadka u wanaagsan: Waxay ka samaysan tahay isku xirnaan bir ah oo waara oo tayo sare leh. Dhammaan qaybaha waxay u adkaystaan ​​miridhku marka loo isticmaalo biyaha caadiga ah ee ka madax-bannaan walxaha xididada leh. Ka sokow, waxay la socotaa tuubbo-dhoobada dhoobada ah oo hubinaysa waxqabadka ugu dhib yar ee aan dhib lahayn iyo sidoo kale socodka biyaha oo hagaagsan. Birta macdanta "lead" looma adeegsanin samaynta si ay u siiso badbaadada ugu badan ee qoyskaaga.
Way fududahay in la rakibo oo la dejiyo. Mid ka mid ah faa iidooyinka tubbadda musqusha waa in ay la socoto aalado buuxa iyo sidoo kale aalado rakiba. Waxay ka mid yihiin saxanka Deck (Afar-inji illaa iyo waxay ku habboonaan kartaa xitaa hal iyo saddex godad), nidaamka chrom wuxuu soosaaraa nidaamka mashiinka loo yaqaan 'chrome' oo lagu daro kaliya tuubadan. Dammaanad leh tuubbooyinka biyaha ee barafka ah ee nus-mitir nus-mitir, galoofyada fasalka ugu fiican, iyo sidoo kale aasaas aamin ah oo aadan u baahnayn caawimaadda qofkasta markii la rakibayo.
Farshaxannada sare ee farshaxanimada leh oo ay ka muuqdaan biyo-qabteyaal heer sare u ah badbaadinta biyaha. Qalabka wax soo saarka sare wuxuu bixiyaa biyo aad u fiican, jilicsan, iyo qumman oo biyaha ka caawin kara nidaamka biyahaaga inuu badbaadiyo biyo ka badan 60% adoo yareynaya kala-baxa biyaha. Si fudud ayaa looga saari karaa iyada oo la adeegsanayo xirmooyinka kor lagu soo sheegay inta lagu gudajiray nadiifinta, sidaas darteed iyada oo la siinayo waaya-aragnimo adeegsade heer sare ah
Waxay la timid dammaanad saddex sano ah iyo adeegyo taageero macaamiil oo bilaash ah oo ay weheliso wax-soo-saar madax-bannaan 90-maalmood.
Musqusha Faucet Single Single 4 XNUMX ​​Inch Centerset Mount Rod.
Qaabkan qasabadaha waxaa laga sameeyay xulashada ugu wanaagsan, tayo sare leh, waarta, teknolojiyad horumarsan si loo hubiyo wax qabad fiican. Kaliya ma aha tubada biyaha musqusha ugu qiimaha badan laakiin sidoo kale waa sheyga ugu waxqabadka badan sanadka. Sababo la xiriira agabkeeda oo tayo sare leh, waxay leedahay cimri dheeri ah oo la wanaajiyey; sidaas darteed, waxaad hubtaa inay kuugu adeegi doonto si raaxo leh waqti dheer.
Muuqaal madow oo aan caadi ahayn. Qubayska musqusha ayaa leh astaamo aan caadi ahayn oo chrome ama nafaqeysan oo jilicsan oo u dhaqma sidii shey qurxin ah oo musqushaada ah, sidaas darteedna abuuraya muuqaal casri ah. Dahaarka madow wuxuu si fudud u fududayn karaa ilaah la'aan.
Waxay la imaaneysaa bullaacadaha wiishka qaada. The Tubada tubada qashin qubka wuxuu la imanayaa daboolka bulukeetiga ee wiishka oo si fudud ugu habboonaan kara nidaamka 3 iyo 4 dalool. Qalabka kor u qaadida wuxuu ka caawiyaa biyaha daadashada gebi ahaanba adigoon qasbin naftaada.
Waxay ka samaysan tahay qalab tayo sare leh oo leh naqshad sareysa. Qubayska biyaha tubada musqusha waxaa laga sameeyay aluminiyum zinc ah oo aan dhibcinayn oo keliya laakiin sidoo kale leh shandad xirmadan oo la aqoonsan yahay sidaas darteed muddo dheer sii jiri karta. Soosaaraha horumarsan ayaa badbaadin kara 60% iyo sidoo kale anti-splatter, sidaas darteed ka dhigeysa waxqabadkiisa mid lagu taliyo.
Hawsha rakibaadda fudud ee u baahan 20 daqiiqo. Haa, mar aad iibsato sheygan, waxaad helaysaa xirmo dhammaystiran oo ah qalabka iyo sidoo kale qalabka wax lagu rakibo. Intaa waxaa sii dheer, waxaad heli doontaa galoofisyo tayo sare leh oo gacmahaaga ilaaliya inta lagu jiro qalabka lagu rakibo. Tayada wanaagsan awgeed, waxaad heli doontaa dammaanad sedex sano ah oo kaa digaya dhibcaha, daadinta, iyo jabsiga iyo sidoo kale adeegga macaamiisha ee marwalba la heli karo.
3.Musqulaha Gawaarida Musqusha ee Musqusha ee gaarka ah
Waxay la socotaa dabool furan oo bullaacad ah, 9.5 inji dherer ah, rakibaadda saddex-god ah oo ah cabbir 5.8 inji ah iyo cabir cabirkiisu yahay 1.4 inji
Waqti dheer tubada qubeyska, iyo sidoo kale daboolka dhoobada dhoobada ah ee bilaashka ah, ku xooji tuubada mitirka nus mitir ee biyaha tucai oo tayo sare leh marka lagu daro alaabada birta ka samaysan ee la socota oo leh caymiska nolosha oo dhan.
Qubeyska tuubbada biyaha musqusha Dharka madow ee gaarka ah ayaa ka dhigaya mid fudud in la dhaqi karo oo la sii wadi karo. Dusha oo dhan ma aha oo keliya ee waa la dhammaystiray oo keliya laakiin sidoo kale waxay darantahay xoq iyo xoqid.
Naqshad-farshaxan farsameysan oo heer sare ah. Qaabka sare ee shaqeynaya ee ah 5.8 “qulqulatadu waxay awood u siineysaa khibrad dhaqid hufan, muuqaal ka hortagga buufin, iyo biyo qulqulaya si aad gacmahaaga si fiican ugu dhaqi kartid adiga oo aan daruuriga u dheerayn.
Raagaya. Qubadani waxay leedahay jirkeeda oo ka samaysan alaab naxaas ah oo adag sidaa darteed waxay si fiican u xakameysaa astaamaha ugu sareeya.
Heerka dabacsanaanta heerka sare. Gacanta laba-heer leh waxay awood u siineysaa xakameyn dabiici ah heerkulka biyaha qubeyskaaga iyo sidoo kale qulqulaha qulqulka muraayadaha muraayadaha-tooska ah ee otomaatiga ah inay si bilaash ah uga baxaan ka dib waligood nus milyan meelood oo wareeg ah.
Gacan keli Kali Fudud oo aad u Fudud oo Musqul leh
Waxay la imaanaysaa qaanso qaanso oo kulul oo kaa caawinaysa sii deynta durdur biyo jilicsan. Waxay sidoo kale soo bandhigaysaa naqshad quruxsan oo ku habboon musqushaada casriga ah. Sidoo kale, waxay la timid shaashad qaab wanaagsan leh isla markaana si taxaddar leh u dejisay moodalka biyaha dabiiciga ah ee biyaha dabiiciga ah kaasoo gacan ka geysanaya nadaafadda tuubooyinka qasabadahaaga.
Khubaro Tayada leh: Waxay la timid daboollo dhoobada aan lahayn dhibic lahayn oo si adag ugu xidh xidhan mitir bakeeriga biyaha ah oo ah nus mitir oo dammaanad ah heerka. Qubayska musqusha ee ugu wanaagsan oo leh Nickel dhammeeyay. Qeyb kasta waxaa loo habeeyay si loo hubiyo inay si fudud u adkeysan karto nooc kasta oo xoq ah, dillaac, iyo sidoo kale si fudud loo dhaqi karo.
Arc Faucet Sare. Qubayska qubayska waxa uu la imanayaa cabbir dhan 5.8-inji oo silsilad ah, kaas oo kuu xaqiijinaya inaad si wax ku ool ah u gaari kartid biyaha adigoon gacmahaaga fidin baahi aan loo baahnayn. Waxa kale oo ay la timaadaa qaabeynta ka-hortaga, taas oo u oggolaaneysa in biyuhu si qumman oo habsami leh u socdaan.
Nacnac Nickle Single Handle Musqul Fucet
Ku habboon musqusha musqusha cabbirka sida soo socota; Gawaarida: 7 inji, Dherer: 11 ″; iyo Cabirka Daloolka: 1.4 ”
Arc sare iyo isjiidjiid wareegaya oo dhan taas oo ka dhigeysa mid ku habboon laba-jibbaarane markii ay dhowr howlood wada shaqeynayaan isku waqti.
Qubayska Qolka Musqusha ee Birta Aan Xabbadda Lahayn si ay uga hortagto miridhku iyo xoqidda maalinlaha ah. Waxaa intaa sii dheer, birta zinc-ka iyo walxaha birta ka sameysan ee aan nadiifka ahayn waxay ka dhigayaan kaliya waara laakiin waxay sidoo kale taabtaan ku dhawaad ​​howlaha. Dhamaan qalabka rakibida waa bilaa-dhibic, markaa wax musqushaada ku dhexmaro.
Hore:: Waa maxay astaamaha Astaamaha Qulqulka Tooska otomaatiga ah? Next: Maxay Tahay Qiimaha Kala Duwan ee Tuubooyinka Aad U Weyn Yahay
2021 / 01 / 10 1114
2021 / 01 / 10 809
2020 / 12 / 21 5258
2020 / 11 / 19 4581
2020 / 11 / 19 4185
2020 / 11 / 18 4463